Ny karazana COVID-19 dia mamely an'i Etazonia
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny karazana COVID-19 dia mamely an'i Etazonia
Ny tranga voalohany voalaza momba ny COVID-19 variant efa notaterina tany Etazonia. Lehilahy iray any Colorado, 20 taona eo ho eo, tsy nisy tantaram-pitetezam-paritany, dia voamarina ary mitokana any amin'ny distrikan'i Elbert County ivelan'i Denver. Ny variant dia nohamafisin'ny Laboratoara State of Colorado.
Ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamam-bahoaka any Colorado dia manadihady tranga hafa mety hitranga ary manadihady raha te hahalala raha toa ka niely nanerana ny fanjakana izany. Nilaza ny tompon'andraikitra fa inoana fa ny vaksinim-panafody omena ankehitriny dia mandaitra ihany koa amin'ny fanoherana izany.
Ny fihenan-tsasatra dia nipoitra voalohany tany Angletera ary inoana fa areti-mifindra kokoa noho ny tadin-dokanga efa fantatra teo aloha. Ny variant UK, fantatra amin'ny anarana hoe B.1.1.7, dia hita ihany koa any Canada, India, Italia, ary UAE.
Ny variana COVID-19 faharoa, fantatra amin'ny anarana hoe 501.V2, dia hita tany Afrika Atsimo. Areti-mifindra ihany koa io variant io.
Hatramin'ny nahitana voalohany an'io virus io tany Chine efa ho herintaona lasa izay dia nisy ny fiovaovan'ny coronavirus vaovao, ary fahita matetika ny fiovan'ny viriosy rehefa miteraka sy mivezivezy amin'ny mponina iray izy ireo. Ny mpahay siansa dia manara-maso ny fihanaky ny viriosy avy amin'ireo fiovaovan'ny viriosy ireo. Ny ahiahy dia raha misy dikany ny variants, ireo vaksininy amin'izao fotoana izao dia mety tsy hanome fiarovana ny karazana vaovao.
Ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana any Colorado dia andrasana hanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety rahampitso alarobia 30 desambra 2020.
Fiantraikan'ny COVID-19: fitantanana krizy sy drafitra ho avy
Tia mandehandeha? Fanasana amin'ny fetin'ny taom-baovao 2020/21 WTN